सेयुङ : एक ‘फकिर’ कोरियाली – Hotpati Media
१० माघ २०७४, बुधबार १०:१२ मा प्रकाशित (3 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
काठमाडौं – ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल्स हाई रुट’को यात्रा त्यसै पनि निकै कठिन मानिन्छ। दक्षिण कोरिया सेजुङकी मुन सेयुङ योङग (३९) ले यो यात्रा एक सय २० दिनमा पूरा गरेकी छिन्। २०६७ सालदेखि निरन्तर नेपाल भ्रमणमा आउन थालेकी योङगलाई ‘ट्रेल्सको हाई रुट’को यात्रा गर्न भने निकै सास्ती खेप्नु पर्योद। उनले २०७० सालदेखि नै यो हाई रुटको पदयात्रा सुरु गरेको थिइन्। निरन्तरको प्रयासले ५ औं पटकमा योङगले यो यात्रा पूरा गरेरै छाडिन्। ट्रेल्स पूरा गर्ने उनी पहिलो कोरियाली नागरिक भएकी छिन्। वर्षमा दुई पटकसम्म यात्रा गरेर उनले एक सय २० दिन लगाएर यात्रा पूरा गरेको बताइन्।
उनलाई यात्रा क्रममा सात दिनसम्म मानवबस्ती नभेटिँदा बोकेको खाना अपुग भएर भोकभोकै यात्रा गर्नु पर्यो । हिमालमा हिँड्नु पर्दा ग्लेसियरले समस्या बनायो। ६ हजार एक सय ४३ मिटरको शेर्पेनी कोल, टासिलाप्चा, आमालाप्चा, लुम्बासुम्बा पास गर्न निकै चुनौती खप्नु पर्यो्। भन्छिन्, ‘यसका बाबजुद पाँच हजारदेखि ६ हजार मिटर उचाइको २५ बढी अप्ठ्यारो बाटोमा यात्रा गर्नु पर्दा निकै आनन्द पनि भयो।’
कोरियामा रहँदासमेत उनी सातामा एक दिन ट्रेकिङ गर्थिन्। उनी अफ्रिका, मलेसिया, पाकिस्तानलगायतका देशमा ट्रेकिङ गरे पनि नेपालको फरक संस्कृति मन तानेर ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल्स हाई रुट’का यात्रामा लागेको बताइन्। यात्राको क्रममा ६ हजार तीन सय मिटरको मेरापिक पुग्दा खुसीको सिमा रहेन उनको। यात्रामा धेरैले उनलाई नेपाली नभनेर शेर्पा पो भन्ठाने रे। नेपालका मानवबस्ती रहेको विभिन्न क्षेत्रको ट्रेकिङ गरेपछि गाउँले जनजीवन मन परेर फेरि हिमाली क्षेत्रको जनजीवन हेर्न ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल्स हाई रुट’को यात्रामा होमिइन्। नेपालको पर्यटन विकासमा ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल्स’ को महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको ठहर छ।
संसारकै लामो र समुद्री सतहबाट उच्च स्थानमा रहेको पदमार्गमध्ये नेपालको ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल्स’ हो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उच्च हिमाली रुटमा यात्रा गर्नु नै यसको मुख्य विशेषता हो। कठिन पदमार्गमा ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा नर्थ आधार शिविर (५,१४७ मि.) देखि हुम्लाको हिल्सा (३६४७ मि.) मा पुगेर ट्रेल पूरा हुन्छ। यो संसारकै लामो र अग्लो पदमार्ग ग्रेट हिमालय ट्रेल्स हाई रुट हो। सुदूरपूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्मको भूभाग ओगटेको यस पदमार्गले नेपालका सबै हिमाली जिल्लालाई छुन्छ। २०६५ देखि औपचारिक रूपमा यो पदमार्ग सुरु भएको हो। यो पदमार्ग करिब एक हजार सात सय किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। नेपालभित्र उत्कृष्ट १० ट्रेकिङ रुटलाई समेटेर यो ग्रेट हिमालय ट्रेल्स तय गरिएको छ।
योङगले यात्राका क्रममा चार वर्षदेखि खिचेका फोटो कोरियाको केबीएस टेलिभिजनले प्रसारण गरेको छ। उनले अनलाइनमार्फत पनि प्रचार गरेकी छिन्। कोरियाका धेरै साथीहरूले नेपालको बारेमा आफूसँग बुझ्ने गरेकाले यहाँको रहनसहन, संस्कृति, जीवनशैलीको यथार्थता बताउँदा दंग परेर नेपाल घुम्न आउने गरेको उनी बताउँछिन्। योङगले एकाडेमी शिक्षक पेसा छाडेर ट्रेकिङ गर्न थालेकी हुन्। उनी हाल कोरियाको केबीएस टेलिभिजन यात्रा संस्करण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्। फेरि नेपाल आएर अन्नपूर्ण क्षेत्रको खिम्रुङ हिमाल आरोहण गर्ने तयारी छ उनको।
गाइड र भरियाबिना ट्रेकिङ गर्दा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ। चिनियाँ पर्यटकले चोलापास गर्ने क्रममा गाइड र भरियाबिना आउँदा बिरामी भएको देखेपछि आफूले उद्धार गरेको उनले बताइन्। यात्रा क्रममा लाङटाङको तिलमाङ पास, मकालुको शेर्पेनीकोल, आमालाप्चा हँदै छुकुङ जाने बाटो बढी चुनौतीपूर्ण रह्यो। शेर्पेनीकोलमा १२ जना एउटै टेन्टमा सुत्न बाध्य भए। यो उनको जीवनकै सम्झनलायक क्षण भयो।
यो यात्रामा वाकिङ, ट्रेकिङ र हाई माउन्टेन ट्रेकिङसमेत गर्नुपर्ने भएकाले उत्कृष्ट भनेर दाबी गर्न मिल्छ। ग्रेट हिमालय ट्रेल्समामा पूर्वी नेपालको कञ्चनजंघा क्षेत्र, मकालु-वरुण, एभरेस्ट-रोल्वालिङ, हेलम्बु-लामटाङ, गणेश हिमाल-लामटाङ, अन्नपूर्ण-मुस्ताङ, डोल्पा-रारा, जुम्ला-हुम्लासम्मको यात्रा पूरा गर्नुपर्छ। ६ हजार एक सय ४३ मिटरको शेर्पेनीकोल पासदेखि तीन हजार मिटर हँदै यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले फरकफरक भाषा, संस्कृति, रहनसहन, जीवनशैली देख्ने अवसर मिलेको थियो योङगलाई। एक बस्तीदेखि अर्को बस्ती पुग्न एक सातासम्म लाग्ने गरेकाले पनि यात्राको फरक अनुभूति हुने गरेको छ यस यात्रामा।
ट्रेल्समा पर्ने बाटो मर्मत, भीरमा सिँढी, खोलामा पुल र आवश्यक संरचना बनाउनु जरुरी रहेको देख्छिन् योङग। साथै पदमार्गमा राख्नुपर्ने चिह्न-संकेत, आकस्मिक उपचारको व्यवस्था, शौचालयजस्ता कुरासमेतको व्यवस्था हुनुपर्ने औंल्याउँछिन् योङग।